Home Wararka Dagaalka Baydhabo oo Xoogeystay iyo Tangiyada Itoobiya oo magaalada Garaacaya (Video)
Dagaalka Baydhabo oo Xoogeystay iyo Tangiyada Itoobiya oo magaalada Garaacaya (Video)
Deg_deg Taangiyada ciidanka Ethiopia ayaa hada dagaalka ku Soo biiray dhimasho Iyo dhaawacyo Badan ayaa jira oo ay kamid Yihiin shacabkii dagaalamaayey. Tangiyada ayaan u meel dayeynin Xabadaha ay tuurayaan, waxaana jira khasaare aad u badan waxaa magaalada ka bilowday qax oo xoog le.
Dagaalka hada waxaa uu ka bilowday agagaarka Madaxtooyada oo Uu Dagaal xoogan Ka socdo. Lama oga xaaladdu waxay noqon doonto waxaasa jiri doonta dhimasho aad u badan.
Halkaan kala soco wixii soo kordha daqiiqad kastaa.
Previous articleMW Farmajo oo Amray in Isgaarsiinta Baydhabo oo hawada laga saaro iyo Dagaal Culus oo laga maqlaayo
Next articleCasharkii ugu Horreeyey Waa bixiyey Afawerki: Farmajo Baydhabo Qabo!!
Banaanbaxyo ka socda Magaalada Dhuusamareeb